ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: ဗိုလ်ချုပ်အတွေး နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အမြင်များ
ဗိုလ်ချုပ်အတွေး နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အမြင်များ
၂၀၁၁ ခု ဇူလိုင်လ(၁၉)ရက် အာဇာနည်နေ့
''နှစ်လရာသီ--အခါရာသီ ရွေ့ပေမယ့် အာဇာနည်နေ့ကိုဖြင့်--မမေ့သင
့်ပါပြီ'' all india ရေဒီယိုမှ မေလှမြိုင်၏ တေးသီချင်း တစ်ပိုင်းတစ်စကို ကြားလိုက်ရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ကျဆုံးချိန်က ကျွန်တော်မှာ ခြောက်နှစ်၊ခုနစ်နှစ်သားအရွယ် ရောက်နေပါပြီ။ ရွာတွင် လူကြီးမိဘများနှင့် ရဟန်း သံဃာများ မျက်ရည်စက်လက် ဖြစ်နေပုံကို ယခု အနှစ် ၆၀ ကျော်လာသည့်တိုင် ပြန်လည် မြင်ယောင်နေပါသည်။
သို့အတွက် Weekly Eleven မှ တစ်ဆင့် ပြည်သူတို့ တင်ပြရန် ဤဆောင်းပါးကို ရေးရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ၁၂၇၆ ခု တပေါင်းလဆန်း ၁ ရက် (၁၃-၂-၁၉၁၅) နေ့တွင် မကွေးခရိုင် နတ်မောက်မြို့ ရှေ့နေကြီး ဦးဖာ၊ ဒေါ်စု တို့က မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဇာတာ အမည် (မောင်ထိန်လင်း) ဖြစ်ပြီး သူ့အစ်ကို ဦးအောင်သန်း အမည်နှင့် လိုက်ဖက်အောင် (အောင်ဆန်း)ဟုပင် ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှာ မင်းတုန်းမင်းကြီး၏ အမတ်တစ်ဦး ဖြစ်သော ခမ်းပတ်မင်းကြီးနှင့် သမားတော် ဦးကျော်ဇံ၊ တောင်တွင်း ရှင်အဂ္ဂသမာဓိ တို့၏ မျိုးဆက် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗြိတိသျှတို့အား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ခဲ့သော ဦးမင်းရောင် (ခ) ဗိုလ်လရောင်မှာ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် အဖိုးလေး တော်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှာ ငယ်စဉ်ကပင် မဟုတ်မခံ၊ မမှန်တာမလုပ်။ တစ်ဦးတည်း ငူတူတူ စဉ်းစားနေတတ်သူ ဖြစ်သည်။
ခုနစ်နှစ်သား အရွယ် နတ်မောက်မြို့ ဦးသောဘိတထံ စာသင်ရာ ၁၂ နှစ်သားတွင် လေးတန်းအောင်သည်။ ထို့နောက် ရေနံချောင်း အ.ထ.က သို့ ပြောင်း၍ သင်ကြားသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းများတွင် ပထမ စွဲသဖြင့် ဆရာကြီး ဦးရွှေခိုင်က ရွှေတံဆိပ်ဆု ပေးခဲ့သည်။
သခင်အောင်ဆန်း ဘ၀က ရေးခဲ့သော (နိုင်ငံရေးအမျိုးမျိုး) ဆောင်းပါးတွင် 'နိုင်ငံရေးသည် လူမှုသူမှု ကိစ္စအားလုံးပင် ဖြစ်၏။ လူဟူ၍ ကမ္ဘာတွင် ဖြစ်လာသည့်အခါ လူတန်းစား အလျောက် လူလိုနေ၊ လူလိုစား၊ လူလိုသောက်၊ လူလိုလုပ်ချင်လာ၏။ လူလိုလုပ်ရန် ကြိုးစားရင်း အထမြောက် အောင်မြင်လာသည်။ ပိုမို ကျယ်ပြောလာ၏။ လူနှင့်တိရစ္ဆာန် ကွဲပြားမှုမှာ လူတွင် တတ်သည့်အစွမ်း၊ မြင်သည့် အစွမ်း ရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်'ဟူ၍ ရေးခဲ့ . . .
ဗိုလ်ချုပ် ၈ တန်း ရောက်သော အခါ ဖခင် ဦးဖာ ကွယ်လွန်ရှာသည်။ ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် ၁၀ တန်း အောင်သဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သမိုင်း History နှင့် Political Science ဘာသာဘွဲ့ကို ရယူသည်။ တစ်နှစ်တစ်တန်း အောင်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၃၅၊ ၃၆ ခုနှစ်များတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ လုပ်ငန်းများ ရှုပ်ထွေးနေသဖြင့် စာမေးပွဲ မဖြေလိုက်ရပါ။ ၁၉၃၇ ခုနှစ်ကျမှ ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ရသည်။ ကိုအောင်ဆန်းသည် တက္ကသိုလ် ရောက်ချိန်မှ စပြီး ပဲခူးကျောင်းဆောင်၌ နေထိုင်ပြီး နိုင်ငံရေး စာအုပ်များကို သဲသဲမဲမဲ ဖတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၁၉၃၅-၃၆ ခုနှစ်တွင် သူသည် တက္ကသိုလ် သမဂ္ဂအဖွဲ့ အမှုဆောင် E.C ဖြစ်လာပြီး အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းကို တာဝန်ခံ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ (ခွေးသရမ်းကြီး လွတ်နေသည်) ဆောင်းပါးကြောင့် အိုးဝေ အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်းနှင့် သမဂ္ဂဦးနု တို့ကို ကျောင်းထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ရီလတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် တက္ကသိုလ်သပိတ်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာရာ လူငယ်များ နိုင်ငံရေး နိုးကြားစ ပြုလာသည်။ ကိုအောင်ဆန်းနှင့် ကိုနုတို့ နယ်ဆင်း၍ ခရိုင်မြို့နယ်များ၌ သမဂ္ဂအဖွဲ့များ ဖွဲ့သည်။ ၃၇/၃၈ ခုနှစ်တွင် ကိုအောင်ဆန်း တစ်ယောက် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ (ဗကသ)ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုနှစ်မှာ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် သခင်မြတို့ ဦးစီးသော ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးကြီး ပေါ်လာရာ ကိုအောင်ဆန်းမှာ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာပြီး (သခင်အောင်ဆန်း) အမည်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ကျောင်းသားထုက ၀ိုင်းဝန်း ထောက်ခံသဖြင့် တက္ကသိုလ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၏ ကော်မတီဝင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်က မော်လမြိုင်၌ သခင်ညီလာခံကြီး ပြုလုပ်နေစဉ် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး စဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ဗိုလ်ချုပ်တို့က အင်္ဂလိပ်အခက် - ဗမာအချက်ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ကိုအောင်ဆန်း၊ ကိုဗဟိန်း၊ သခင်သန်းထွန်း တို့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရမ်ဂါ မြို့တွင် ကျင်းပသော ကွန်ဂရက် ညီလာခံသို့ တက်ခဲ့သည်။ ညီလာခံမှအပြန် သခင်အားလုံးကို အစိုးရက ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်သည်။
အောင်ဆန်းကိုမိလျှင် ငွေ ၅ိ/- ဆုချမည်ဟု ဟင်္သာတခရိုင် ရဲဝန် မစ္စတာ ဇေဗီးယားက ပြောင်လှောင်ကာ ဆုငွေများ ထုတ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်တို့က အင်္ဂလိပ်ထံ လက်ဝါးဖြန့် တောင်းခံနေရုံမှဖြင့် လွတ်လပ်ရေးကို ရနိုင်မည် မဟုတ်။ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်မှ ရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး ဂျပန်နှင့် စေ့စပ်ကြည့်သည်။ ဂျပန်တို့က ကူညီမည် ဆိုသဖြင့် ဗိုလ်တေဇ (ခ) ကိုအောင်ဆန်းတို့ အဖွဲ့ ဂျပန်ပြည်သို့ ထွက်ခွာခဲ့ရာ ၂၄-၈-၁၉၄၀ ရက်နေ့တွင် အမွိုင်သို့ ရောက်သည်။ ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် တိုကျိုသို့ သွားကာ လျို့ဝှက်စကား ဆိုခဲ့ကြသည်။ သဘောတူညီချက် ရသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်သို့ ခေတ္တ ပြန်ရောက်ကာ မျိုးချစ် လူငယ်များကို တစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ် ခေါ်ထုတ်သွားရာ ဟိုင်နန်ကျွန်းပေါ်သို့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်လုံး ရောက်ရှိသွားသည်။
ဗိုလ်တေဇနှင့် သခင်လှမြိုင်တို့ ဦးဆောင်၍ ဟိုင်နန်ကျွန်းတွင် စစ်ပညာများ အပတ်တကုတ် သင်ယူပြီး ၁၉၄၁ ခုနှစ်မှာပင် ယိုးဒယားဘက်သို့ ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ ဘန်ကောက်သို့ ရောက်လျှင် ၂၆-၁၂-၁၉၄၁ ရက်နေ့တွင်
ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ် မတော် BIA (Burma Independence Army) ကို ဖွဲ့စည်းကာ စစ်ကြောင်းများ ခွဲ၍ ဂျပန်တပ်များနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြန်ဝင်လာခဲ့ကြသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း အရှေ့တောင်ဘက်မှ စ၀င်သည်။
စစ်ကြီးအတွင်း ၁၁-၁၂-၁၉၄၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဗုံးဒဏ်ခံရပြီး လူ ၆၀၀ ကျော် သေဆုံးသွားသည်။
အင်္ဂလိပ်တပ်များ ရန်ကုန်မှ ဆုတ်ခွာသွားရာ ၈-၃-၁၉၄၂ ရက်နေ့တွင် B.I.A ဦးစီး ဂျပန်တပ်များက ရန်ကုန်မြို့ကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ ထိုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် B.I.A ကို B.D.A (Burma Defence Army) အဖြစ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဗိုလ်တေဇမှာ ဗိုလ်မှူးကြီးမှ စစ်ဦးစီး သေနာပတိချုပ် ဖြစ်လာသည်။ BIA တပ်မတော်တွင် စစ်သေနာပတိချုပ် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အကြီးအကျယ် ဖျားနာခဲ့သည်။ အလံပြဘုရားလမ်း စစ်ဆေးရုံ၌ တက်ရောက် ကုသနေစဉ် သူနာပြု ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် မေတ္တာမျှပြီး ၁၉၄၂ ခုနှစ် မေလတွင် လက်ထပ်လိုက်ကြသည်။ သားနှစ်ဦး၊ သမီးတစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။
၁၉၄၃ ခု မတ်လတွင် ဒေါက်တာ ဗမော်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ကို ဂျပန်ပြည်သို့ ခေါ်ကာ ဂျပန်ဘုရင်က ဗိုလ်ချုပ်အား မေဂျာဂျင်နရယ် အဆင့် တိုးမြှင့်ပေးလိုက်သည်။ ၁-၈-၁၉၄၃ ရက်နေ့တွင် ဗမာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေးပေးကြောင်း ဂျပန်က ကြေညာခဲ့သည်။
ဂျပန် လွတ်လပ်ရေးမှာ အတုအယောင် ဖြစ်သဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်က ဖက်ဆစ်ကို တော်လှန်ရန် ထိုနှစ် သြဂုတ်လမှာပင် ဖက်ဆစ်တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ဖ၊တ၊ ပ၊ လ)ကို ဖွဲ့စည်းသည်။ နောင်အခါ ဖ၊ တ၊ ပ၊ လ မှာ (ဖ၊ ဆ၊ ပ၊ လ) အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်လာပြီး ၂၇-၃-၁၉၄၅ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ဦးစီး ဗမာ့တပ်မတော်က ဂျပန်များကို တော်လှန်ရေး လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုတော်လှန်ရေးတွင် မြန်မာတို့က အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုသို့ ဂျပန်ကို အောင်မြင်စွာ မောင်းထုတ်လိုက်နိုင်သဖြင့် အင်္ဂလိပ်တို့က ဗိုလ်ချုပ်ကို အထင်ကြီးလာသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင့်ဘက်တန်နှင့် ဘုရင်ခံ ဆာဒေါ်မံစမစ် တို့က ဗိုလ်ချုပ်အား ဘုရင်ခံ၏ အတိုင်ပင် ကောင်စီတွင်
ရာထူးကြီး ပေးသော်လည်း လက်မခံခဲ့ပါ။ ၃-၅-၁၉၄၅ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလိပ်တို့ ရန်ကုန် ပြန်ဝင်လာပြီး (ကက်စ်ဘီ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး)ကို စတင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် နေသူရိန် အစည်းအဝေးကြီးကို ကျင်းပကာ ဗြိတိသျှကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
ဂျပန်ကို အောင်မြင်စွာ မောင်းထုတ်လိုက်နိုင် သဖြင့် အင်္ဂလိပ် တို့က ဗိုလ်ချုပ်ကို အထင်ကြီးလာသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင့်ဘက်တန်နှင့် ဘုရင်ခံ ဆာဒေါ်မံစမစ် တို့က ဗိုလ်ချုပ်အား ဘုရင်ခံ၏ အတိုင်ပင် ကောင်စီတွင် ရာထူးကြီး ပေးသော်လည်း လက်မခံခဲ့ပါ . . .
၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် ဆာဟူးဘတ်ရန့် ဘုရင်ခံဖြစ်လာရာ အမှုထမ်းပေါင်းစုံ သပိတ်ကြီး ပေါ်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ် တို့၏ ဖဆပလ ယာယီ အစိုးရ တက်လာသည်။ နောက်တစ်နှစ် ၁၇-၁-၁၉၄၇ ရက် နေ့စွဲတွင် အင်္ဂလန်၌ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် မစ္စတာ အက်တလီတို့ လွတ်လပ်ရေး အကြို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်သော အခါ တိုင်းရင်းသား ညီညွတ်ရေး အတွက် ၄၇ ခု ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပင်လုံညီလာခံကို ကျင်းပသည်။ ဗြိတိသျှတို့ဘက်မှ မစ္စတာ ဗော့တွန်မလေ တက်သည်။
၁၉၄၇ ခု ဧပြီလတွင် ပထမဆုံး အကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကျင်းပရာ ဗိုလ်ချုပ်တို့ပင် အနိုင်ရခဲ့သည်။ ထိုသို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လွတ်လပ်ရေး အမြန်ရအောင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေစဉ် ဗိုလ်ချုပ်နှင့် အာဇာနည်
ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို ၁၉-၇-၁၉၄၇ ရက်နေ့က ဦးစော အဖွဲ့က လုပ်ကြံလိုက်သည်။ သို့နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အသက် ၃၃ နှစ် အရွယ်မှာပင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း ၀မ်းနည်းစွာ တင်ပြရပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်၏ နိုင်ငံဒဿန အမြင်များ
ဗိုလ်ချုပ်မှာ မျိုးချစ် နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦး ဖြစ်သကဲ့သို့ စာရေးကောင်းသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ သူ၏လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး အတွေးအခေါ်များမှာ ကျွန်ဘ၀ ရောက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် အလွန် တန်ဖိုး ရှိသည်။ သခင်အောင်ဆန်း ဘ၀က ရေးခဲ့သော (နိုင်ငံရေး အမျိုးမျိုး) ဆောင်းပါးတွင် ''နိုင်ငံရေးသည် လူမှုသူမှု ကိစ္စအားလုံးပင် ဖြစ်၏။ လူဟူ၍ ကမ္ဘာတွင် ဖြစ်လာသည့် အခါ လူတန်းစား အလျောက် လူလိုနေ၊ လူလိုစား၊ လူလိုသောက်၊ လူလိုလုပ်ချင်လာ၏။ လူလိုလုပ်ရန် ကြိုးစားရင်း အထမြောက် အောင်မြင်လာသည်။ ပိုမို ကျယ်ပြောလာ၏။ လူနှင့်တိရစ္ဆာန် ကွဲပြားမှုမှာ လူတွင် တတ်သည့် အစွမ်း၊ မြင်သည့် အစွမ်း ရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်'' ဟူ၍ ရေးခဲ့သည်။ဗမာ့နိုင်ငံရေးဝါဒနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ''ဗမာပြည်မှာဆိုရင် အုပ်စိုးကြတဲ့ လူများရဲ့ နိုင်ငံရေးက တစ်မျိုး (နယ်ချဲ့စနစ်ကို အမှီပြုနေသည်) အုပ်စိုးခံရသော ဗမာ လူမျိုးများ၏ နိုင်ငံရေးက တစ်မျိုး (လွတ်လပ်ရန် အခြေခံသည်) လွတ်လပ်ရေး လိုချင်သည် ဆိုရာမှာလည်း ဗမာတွေ ငတ်ပြတ်နေရာမှ ၀၀လင်လင် စားချင်လို့၊ ကုသိုလ်လုပ်ချင်လို့ပင် ဖြစ်သည်''ဟု ရှင်းလင်း ရေးသားခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ လုပ်ကြံ မခံရမီ ငါးရက်အလို ၁၄-၇-၁၉၄၇ ရက်နေ့က အတွင်းဝန်ရုံး၌ စာပေပညာရှင်များနှင့် ပြောခဲ့ပုံမှာ ဗိုလ်ချုပ်၏ ဒဿနအမြင်ကို ထင်လင်းစေပါသည်။ သူက ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုအား ''ကျွန်တော်လည်း နိုင်ငံရေးက ထွက်မှာပါပဲ ဆရာ။ ထွက်ပြီးတော့ စာရေးမယ်ကြံတယ်။ ကျွန်တော် ကျောင်းမှာနေတုန်းက ပါဠိရော မြန်မာစာကိုပါ ယူခဲ့တယ်။ မြန်မာစာမှာ အမှတ် ကောင်းကောင်း ရတယ်။ ကျွန်တော် ကြိုးစားရင် ဒစ်စ်စတေးရှင်းတောင် ရမှာပဲ'' ဟုပြောခဲ့ပုံမှာ ဗိုလ်ချုပ်၏ ၀ါသနာကို ဖော်ညွှန်းနေပေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာဖြင့် ဆောင်းပါး ၁၆ ပုဒ် ရေးခဲ့သည်။ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ သမိုင်းရေး၊ စစ် စာပေ စုံလှ၏။ ပဲခူးကဝေ၊ အညာသားလေး၊ မောင်အောင်ဆန်း၊ သခင်အောင်ဆန်း ကလောင် အမည်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ (Burma and Buddhism) ဆောင်းပါးကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးခဲ့သည်။ ဘာသာရေးပိုင်း အစုံအလင် ပါသည်။ ကာလာမသုတ္တန် (Kalama Suta)ကို ကိုးကား၍ ရေးခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘုရားက 'ကြားရရုံဖြင့် မယုံကြည်ရန်၊ မြင်ရရုံဖြင့်လည်း မယုံကြည်ရန်၊ ရှေးဆရာများ ပြောခဲ့ရုံမျှဖြင့်လည်း မယုံကြည်ရန် ဟောဖူးကြောင်းကို ''Lord Buddha Said; Do not believe in anything because you have heard; Do not believe in tradition by they have been handed down; Do not belive in anything, because it is rumoured and spoken by many''ဟူ၍ ရှင်းလင်း ရေးသားခဲ့ပါသည်။
မောင်အောင်ဆန်း အမည်ဖြင့် ရေးသော ၀ိဟာရဆောင်းပါးတွင် ''သတ္တ၊ သင်္ခါရ၊ သြကာသ လောကကြီးသည်ကား ငါတို့အားလုံး အဖိုး မဖြတ်နိုင်သော ၀ိဇ္ဇာပညာကို သင်ရာ ကြားရာ၊ မှတ်ရာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီး အစစ်ပင်တည်း။
. . . ရာဇ၀င် အစုံစုံကို ကြည့်မည် ဆိုလျှင် ပထမ လူရိုင်းခေတ်၊ ထို့နောက် အိမ်ထောင်ယာချ ပြုသောခေတ်၊ နောက်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူးလူးဆက်ဆံ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား၊ လောဘမီး၊ ဒေါသမီး တောက်လောင်သော ခေတ်ဖြစ်၏။ သို့ဖြင့် မင်းကျင့်တရား ဆယ်ပါး၊ သင်္ဂဟတရား လေးပါး စသော ၀တ္တရားများကို ထမ်းဆောင်နိုင်မှု မရှိ။ ပျက်ကွက်သဖြင့် ဝေသန္တရာမင်းကြီး တိုင်းပြည်မှ ထွက်သွားရသည်။ သီဟဗာဟု မင်းသား တိုင်းပြည်မှ အနှင်ခံလိုက်ရ၏' စသည်ဖြင့် အကိုးအထောက်နှင့် တကွ ရေးသားခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်သည် 'အောင်ဆန်းနှင့် စာပေဆောင်းပါး'တွင် လူထုလူတန်းစား အသီးသီးကို ဤသို့ လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
''ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ပြုစုရမယ့် စာပေ အရေးအသားဟာ ဒီသဘောတရားများနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ စာပေမျိုး ဖြစ်ရမယ်။ ဒါမှလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာပေဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းကို မီမယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီမှ ကျပ်ပြည့်ဒင်ပြည့် တန်ဖိုး ရှိမယ်။ ယဉ်ကျေးမှု စနစ်ကြီးလည်း ချက်ချင်း တိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှု စနစ်ကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း မရှိဘဲနှင့် ခေတ်ပြောင်း၊ စနစ်ပြောင်း တိုးတက်ရေး မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။''
''တစ်ကမ္ဘာလုံးဟာ ယခုအခါ ခေတ်ပြောင်းနေချိန် ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူ ခေတ်နောက်မကျန်အောင် အမီလိုက်ကြစို့။ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံကြီးမှာ ကမ္ဘာ့တေးသံစုံတွေကို လိုက်ပြီး ကနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်အောင် ဖန်တီး ပြုပြင်ကြစို့။ လက်ဝယ်ရှိတဲ့ လုပ်ငန်း တာဝန်တွေ အလိုက် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်ကြစို့။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး စစ်သားရော၊ နိုင်ငံရေးသမားရော၊ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာ ဆရာများပါ ဗမာတစ်မျိုးလုံး . . . ခေတ်ပြောင်း အလုပ်ကို တူပြိုင်ပြိုင် လုပ်ကိုင်ကြပါစို့''ဟူ၍ ရေးသားခဲ့ကြောင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စာပေ သဘောတရားများကို နိဂုံးချုပ် တင်ပြရပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ စာပေလက်ရာ (မြဟန်)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁၅)
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, July 14, 2012
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 8:08 AM